'Ekhaya'! Igugu lesimanjemanje, elibanzi le-2BR eline-loft!
Hoboken, New Jersey, i-United States
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Rob & Lisa
Siyakwamukela ku-'Home'boken! (Uyabona ukuthi senzeni lapho?) Siyabonga ngokuhlola ingxenye yethu yakudala yomhlaba charm/ukuphila kwesimanje 2 BR condo ephelele ene-skylit loft. Indawo ephelele yabahambi bebhizinisi noma imibhangqwana embalwa efuna ubusuku obujabulisayo. Uzoba nendlu yakho yonke, ilungele abashadikazi abasebenza ukude, izinketho eziningi zendawo yokusebenza yangasese. Indawo enhle yephupho le-foodie noma abangani abambalwa abafuna ubusuku edolobheni, ngaphandle kokukhokha izintengo zedolobha! IG: ekhaya.boken
Igumbi lokuhlala elithokomele kanye nekhishi kuyipulani yesitayela esivulekile, elungele ubusuku bokuphumula ekuphekeni noma ekuphumuleni. Igumbi lokuhlala linempahla ye-chic, usofa wangokwezifiso one-chaise, isitulo sesikhumba esithokomele kakhulu. Ingasaphathwa eye-Smart TV engu-55 inch ene-Roku yokusakaza isipesheli sakho se-Netflix esiyintandokazi sokuzilibazisa noma umdlalo omkhulu! (Hamba Ezemidlalo!)
Ikhishi linikeza konke okudingayo ukuze ulungise ukudla ngesikhathi sokuhlala kwakho. Iza iphelele nezinhlobonhlobo ze-cookware kanye ne-kitchenware. Uzothola umshini wekhofi wokwenza isiphuzo sakho sasekuseni, amabhodwe, amapani, ingilazi, izitsha, izinto zesiliva kanye nezinto ezibalulekile ozozidinga ukuze ufake izinongo ngesidlo sakho sakusihlwa.
Womabili amagumbi okulala anomatilasi begwebu benkumbulo yosayizi wendlovukazi abambozwe ngezinto zokunethezeka ezinezingubo zokulala nemicamelo eminingi eyengeziwe. Amathunzi amnyama ngokwezifiso avumela ukulala noma ukwelapha lokho kubambezeleka kwe-jet. Vula izithunzi ukuze uthole ukukhanya kwemvelo okuhle emini. Womabili amakamelo okulala ane-TV yesikrini esiyisicaba esifakwe uma iqembu lezigelekeqe lifuna ukubuka okuthile okuhlukile. Inala yesikhala sekhabethe kanye nendawo yemithwalo. Kukhona nedeski elinikezelwe kanye nendawo yokusebenzela ekamelweni elingaphambili.
Igumbi lokugezela lifakwe amathawula aluhlaza nezinto zangasese ezibalulekile, isomisi sezinwele kanye neshawa yemvula.
Kukhona futhi Iwasha ENTSHA KAKHULU kanye nesomiso eyunithi, zizwe ukhululekile ukuyisebenzisa njengoba kudingeka, okokuhlanza kanye nesithambisi sendwangu sifakwe ekhabetheni lokulala laseCalifornia. Futhi uma udinga ukucindezela kakhulu ngeSonto lakho, kukhona nensimbi ephathekayo.
Okokugcina, indawo yokuphumula ye-skylit, thatha incwadi bese ukhuphukela lapho ukuze uphumule, noma ingaphinda kabili njengendawo yokusebenza yesibili egcwele nge-USB noma iphrinta engenantambo.
I-HDTV engu-55" ene- I-Roku
Idolobha laseMile Square, indawo okwazalelwa kuyo iSinatra neBaseball! Muningi umlando kuleli dolobhana. I-Hoboken inokuhamba phambili kwayo yomibili imihlaba, zonke izinzuzo zedolobha elikhulu, kodwa umphakathi wangempela uzizwa. Imizuzu nje ukusuka e-NYC, kodwa kuningi ongakunikeza ngakolunye uhlangothi lomfula futhi. Uma ungumuntu othanda ukudla, wamukelekile ezulwini! Uma ukhetha ukuphequlula ama-brownstones amahle, ukuhambahamba emanzini nokuthatha isampula ye-craft cocktail noma amabili, usenhlanhleni!
Ibungazwe ngu-Rob & Lisa
Ujoyine ngo-Agasti 2021
Sihlala edolobheni eliqhele ngekhilomitha nje ukuze sikwazi ukutholakala kunoma yiziphi izidingo ezingase ziphakame!
URob & Lisa Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Hoboken namaphethelo